ဥရောပတိုက်နဲ့ အာရှတိုက် နှစ်ခုကိုခွထားတဲ့ Istanbul မြို့လေး | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on February 9, 2019 by Nu Myat
ဥရောပတိုက်နဲ့ အာရှတိုက် နှစ်ခုကိုခွထားတဲ့ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့လေး
လေယာဉ်ပျံမစီးဘဲ အာရှတိုက်မှာ မနက်စာစား၊ ဥရောပတိုက်မှာ နေ့လည်စာစားပြီး ညစာကို အာရှတိုက်မှာ ပြန်စားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်လား။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့က အာရှတိုက်နဲ့ ဥရောပတိုက်ကိုခွထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်ခုတည်းသော မြို့လေးဖြစ်နေလို့ပါ။ မြို့တစ်ဝက်က အာရှတိုက်မှာရှိပြီး တစ်ဝက်ကတော့ ဥရောပတိုက်မှာရှိနေပါတယ်။ မာမရာပင်လယ်နဲ့ ပင်လယ်နက်နှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ဘော့စ်ဖရပ်(စ်) ရေလက်ကြားက တိုက်ကြီးနှစ်တိုက်ကို ပိုင်းခြားထားတာပါ။ ဘော့စ်ဖရပ်(စ်)ရေလက်ကြားမှာ ဥရောပနဲ့ အာရှကိုဆက်ပေးတဲ့ တံတား ၃စင်းရှိပြီး ရေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတွေလဲရှိလို့နေပါတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့က အင်အားကြီးမားခဲ့တဲ့ ရှေးခေတ်အင်ပါယာတွေဖြစ်တဲ့ ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာ၊ ရောမအင်ပါယာ၊ အော်တမန်အင်ပါယာစတဲ့ ခေတ်ကာလတွေ ဆက်တိုက် မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ အခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ တူရကီနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မြို့တော်ကတော့ အန်ကာရာ (Ankara) မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်း တူရကီနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၅သန်းတောင်နေထိုင်တဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့မြို့လည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ကျော်ရဲ့ လူဦးရေထက်တောင်ပိုများတဲ့ အရေအတွက်ပါ။ ၁၅၀၂ခုနှစ်တုန်းက ကမ္ဘာ့လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး အခုခေတ်မှာတော့ ပဉ္စမမြောက်လူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ မြို့နေလူဦးရေရဲ့ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းက အာစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တာကြောင့် ပုဂံမှာ စေတီပုထိုးတွေကို လက်ညှိုးထိုးမလွဲတွေ့နိုင်သလို အစ္စတန်ဘူလ်မှာလည်း ပလီတွေကို လက်ညှိုးထိုးမလွဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်တစ်မြို့ထဲမှာတင် ပလီပေါင်း ၃၁၁၃ခုရှိနေတာပါတဲ့။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရဲ့ အထင်ကရအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ ဟာဂျီယာဆိုဖီယာ (Hagia Sophia)ကို ၅၃၇CE ခုနှစ်က ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဖြစ် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၄၅၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အော်တမန်အင်ပါယာအရောက်မှာတော့ ပလီအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ သမိုင်းဝင်ပြတိုက်ကြီးအဖြစ်ပြသထားပြီး တူရကီမှာ ဒုတိယမြောက်ဧည့်သည်အ၀င်ဆုံးပြတိုက်ဖြစ်ကာ တစ်နှစ်ကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၃သန်းကျော် ၀င်ရောက်လေ့လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအဆောက်အအုံကြီးဟာ စဆောက်ပြီးကတည်းက ၁၅၂၀ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး Church ကျောင်းကြီးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ကျော်ရပ်တည်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၅၂၀ခုနှစ်မှာ စပိန်နိုင်ငံမှာ Seville Cathedral တည်ဆောက်ပြီးနောက် အဆင့်လျှောကျခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၄၆၁ခုနှစ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ Grand Bazaar ဈေးကြီးကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးအမိုးပါတဲ့ဈေးပါတဲ့။ ဈေးကြီးထဲမှာ ဆိုင်ပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်၊ လမ်းပေါင်း ၆၀ရှိပြီး ဈေးဝယ်သူပေါင်း နေ့စဉ် ၃သိန်းကျော် လာရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဧည့်သည်ပေါင်း ၉.၁ကုဋေ ၀င်ရောက်လို့ ၂၀၁၄ခုနှစ်က ကမ္ဘာ့ခရီးသွားအများဆုံးဝင်ရောက်တဲ့ Tourist Attraction အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကျူးလစ်ပန်းတွေကို နယ်သာလန်နိုင်ငံကနေ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကျူးလစ်ပန်းဖူးတွေကို အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကနေ သြစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယာနာမြို့ကို ၁၅၅၄ခုနှစ်မှာ အရင်ပို့ပြီးမှ နယ်သာလန်အထိဆက်ပို့ခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ကနေမှ နယ်သာလန်တွေ အလွန်နှစ်သက်သွားလို့ ပန်းခင်ြးီ့းတွေနဲ့ စိုက်ပျိုးပြီး နယ်သာလန်နဲ့ ကျူးလစ်ပန်းတွေ ခွဲမရ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အော်တမန်အင်ပါယာတုန်းက ဥရောပမြို့ကြီးအတော်များများမှာ အိမ်သာတွေမရှိခဲ့တုန်းက အစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှာတင် အများပိုင်အိမ်သာပေါင်း ၁၄၀၀ ရှိခဲ့ဖူးလို့ အထူးအဆန်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အာဂါသာခရစ္စတီရဲ့ နာမည်ကျော် လူသတ်စုံထောက်ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ Murder on the Orient Express ကို အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရဲ့ Pera Palas Hotel မှာရေးသားခဲ့တာပါ။ Oriental Express ရထားက အဲ့ခေတ်မှာ ပဲရစ်ကနေ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရထားပါ။
ရောမမြို့လိုပဲ တောင်၇လုံးပေါ် မြို့တည်ထားတဲ့ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှာ ဟာဂျီယာဆိုဖီယာပြတိုက်နဲ့ မဟာဈေးတို့အပြင် ပလီပြာ၊ ရှေးမြို့ဟောင်း Sultanahmet၊ မြေအောက်ဘုရားကျောင်း Basilica Cistern၊ စစ်အကျဉ်းသားတွေထားရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Galata Tower မျှော်စင်၊ Topkapi နန်းတော်နဲ့ တခြားနန်းတော်တွေ၊ တူရကီတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို စွဲဆောင်တဲ့နေရာတွေကို ပုံစံငယ်လေးတွေအဖြစ် တစုတစည်းထဲပြသထားတဲ့ Miniaturk ပန်းခြံတို့ကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အာရှတိုက်နဲ့ ဥရောပတိုက်ကြားရှိ ဘော့စ်စရပ်(စ်)ရေလက်ကြားမှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောစီးရတာလည်း ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။
This entry was posted in Asia, Europe, Uncategorized. Bookmark the permalink.
← Patom Organic Living in Bangkok